ဆွမ်းဦးပုညရှင် ဘုရားသမိုင်းအကျဉ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဆွမ်းဦးပုညရှင် ဘုရားသမိုင်းအကျဉ်း
Posted by San Hla Gyi on Jul 28, 2012 in Buddhism, History | 22 comments
ဆွမ်းဦးပုညရှင် စေတီတော်သမိုင်းကို နှစ်ခါတောင်မေးတာ တွေ့လို့ မိတ်ဆွေတွေ သိပ်သိချင်နေတယ် ထင်လို့ ကျနော်သိသမျှ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ မွန်ဂိုတွေနဲ့ မြန်မာတွေ တိုက်ခိုက်တဲ့ စစ်ပွဲကို ဦးစီးတဲ့ ရှမ်းဗမာမင်းကြီး ပင်းယသီဟသူလက်ထက် မှာတည်ခဲ့တာပါ။ အဆို ၂ ခုဖတ်ဖူးပါတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီး ကွမ်းခွက်တော်မှာ ထည့်ပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဓတ်တော် ၇ဆူအနက် ၅ဆူကို ကောင်းမှုတော် ရွှေစည်းခုံဘုရားတွင် ဌာပနာတော်မူတယ်။ ကျန် ၂ဆူကို ပုညအမတ်ကြီးက စစ်ကိုင်းပုညရှင်ဘုရား တည်ပြီး ဌာပနာပါတယ်။ ဒါက ပထမအဆိုပါ။
နောက်ထပ်တွေ့တဲ့ အဆိုက ပင်းယသီဟသူမင်းကြီး လက်ထက်မှာ သီဟိုဋ္ဌ်ကုလားတို့သည် ပြည်ရွာပျက်ပြားစေခြင်းဌာ ကွမ်းလောင်း ကွမ်းခွက်တွင် မွေတော် ဓတ်တော်တို့ကို ဌာပနာပြီးလျှင် ဆက်သလိုက်၏။ မင်းကြီးလည်း ပညာရှိတို့ကို တိုင်ပင်ပြီး မယုံကြည်သောကြောင့် ကွမ်းလောင်း ကွမ်းခွက်တို့ကို ပန်းထိမ်သည် ငစိန်သင်ကို ဖျက်စီးစေသည်။ ညတွင် ပန်းထိမ်သည် ငစိန်သင်အိမ်တွင် တူတွင်တဆူ ပေတွင်တဆူ ကွမ်းလောင်းမှထွက်၍ ကိန်းဝပ်တော်မူပြီးလျှင် အရောင်ခြောက်ပါးနှင့်တကွ တထိန်ထိန် ပြာဋိဟာကို ပြတော်မူ၍ တအိမ်လုံး လင်းထိန်နေလေသည်။ ပန်းထိမ်သည် ငစိန်သင်လည်း ကြောက်ရွံ့လှသောကြောင့် တူပေတန်ဆာ တို့ကိုယူပြီးလျှင် ညဉ့်ချင်း စစ်ကိုင်းဘက်သို့ကူး၍ အသင်္ခယာစောယွမ်း၏ အမတ်ကြီးပုညအား မွေတော်ဓတ်မြတ်၏ အကြောင်းကို ပြောပြလေသည်။(အသင်္ခယာစောယွမ်းသည် ပင်းယသီဟသူ၏ နောင်တော်ဖြစ်သည်။)
ပုညအမတ်ကြီးနှင့် ပန်းထိမ်သည် ငစိန်သင်တို့လည်း အခြားလူတို့ကို မသိစေရပဲ နာဂဒတ္တတောင် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးတည်သော စေတီနားတွင် စေတီတည်ထား ကိုးကွယ်လေသည်။ နတ်တို့ ကူညီသောကြောင့် စေတီလည်း နေ့ချင်းပြီး ပြည့်စုံလျှင် ပုညအမတ်ကြီးနှင့် ပန်းထိမ်ဆရာ ငစိန်သင်တို့လည်း ရေစက်သွန်းချသောကြောင့် ခပ်သိမ်းသော လူနတ်တို့ သာဓုအနုမောဒနာ ပြုကြလေသည်။
ဇေယျာပူရမြို့ ထီးနန်းတည်ဘုရင် အသင်္ခယာစောယွမ်းကြားလျှင် ငါဘုရင် ဖြစ်ပါလျှက် ငါ့အမတ်ကြီးသည် ငါ့ကို မတင်မလျှောက် ငါလည်းမသိရ ငါကုသိုလ်မပါရသလော ဟုစိတ်နှလုံးမသာ အမျက်ထွက်ပြီး ပုညအမတ်ကြီးနဲ့ ပန်းထိမ်ဆရာ ငစိန်သင်ကို ရေတွင်စိမ်စေပါတယ်။(စာထဲမှာ ရေစိမ်တယ်လို့ပဲ ပါပါတယ်။ ရေနှစ်သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒဏ်ပေးတဲ့ သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။)
ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ရေတွင်စိမ်သောအခါ အမတ်ကြီးနဲ့ ပန်းထိမ်ဆရာကို ရေမစွပ် ရေတို့ဝိုင်းပြီးနေသောကြောင့် ယခုထက်တိုင် ရေဝန်းအရပ်လို့ ခေါ်တယ်လို့ စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစပြီး ပုညအမတ်ကြီး စေတီတည်ထား ကိုးကွယ်သောကြောင့် ပုညရှင်တောင်နဲ့ ပုညရှင်စေတီလို့ ခေါ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၆၇၄ မှာပုညရှင်စေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တေးထပ်တခုထဲမှာ “ဝါဦးပုဏ္ဏိန် ခါသမယ၌ ဇေယျာပူရ ပြည်သားပြည်သူ ဆွမ်းဦးစကပ်လှူ ပုညရှင်ဟု သမိုင်းထူသည် ဘွဲ့တော်မွေးကြူသင်းပြန့် လှပါသလေး” လို့ဖတ်ဖူးတာမို့ စစ်ကိုင်းသူ စစ်ကိုင်းသားတွေက စပြီး ဆွမ်းဦးကပ်လှူရာမှ ဆွမ်းဦးပုညရှင်လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါကြောင်း။
(ကိုပေါက် ဓတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ရေးကြည့်လိုက်တာပါ။ ဒီပို့စ်လေးဟာ ကြည်ညိုစိတ်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက်ပါ။ စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့အတိုင်း ဘုရားသမိုင်းကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ မယုံကြည်သူ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များက မိမိမယုံကြည်လျှင်နေပါ။ မိမိကို မထိခိုက်ပဲ သူများ ကြည်ညိုသဒ္ဓါကို မဝေဖန်ပါနှင့်။ သတိပေးခြင်းပါ။ ဝေဖန်ပါက ကျုပ်ပါးစပ်နဲ့ တွေ့မည် ဟဲ ဟဲ။)
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ပထမဆုံး လာရောက်ဖတ်ရှု ကွန်မန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ အစီအစဉ် မရှိပဲ ရုတ်တရက် ရေးလိုက်တာမို့ ကျနော် ရေးနေကျ ပို့စ်တွေထက် နည်းနည်းတိုသွားလို့ ဖတ်ရှုသူ အပေါင်းအား တောင်းပန်ပါကြောင်း။ ရေးနေတုန်း ထည့်ဖို့မေ့သွားတာလေး ထပ်ဖြည့်ပါမည်။ အဲဒီ ပုညရှင်တောင်ကို ကကုသန် ဘုရားရှင် လက်ထက်တွင် သေလာပဗ္ဗတတောင် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကောဏာဂုံ ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာ ဝင်္ဂစာရတောင် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကဿပ ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာ ဓမ္မိကတောင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂေါတမ ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာ နာဂဒတ္တမထေရ် နေဖူးလို့ နာဂဒတ္တတောင် လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ပုညရှင်တောင်လို့ ခေါ်လာကြတယ်လို့ မှတ်ရဖူးပါတယ်။
တစ်ခါမှ မဖတ်ခဲ့ဖူး မသိခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ
ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဘုရားကို သွားဖူး ဘူးပါတယ် ။ ဘုရားသမိုင်းကိုတော့ လေ့လာရကောင်းမှန်းမသိခဲ့လို့လေ့လဲ မလေ့လာ ၊ ဘယ်မှာလေ့လာရမှန်းလဲ မသိခဲ့ပါ ။
အဆိုပါ ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဘုရားတောင်ပေါ်မှာ ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုတောင် ကိုပေါက် က လူသစ်လေး ဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ကိုစံလှကြီး ရဲ့ ပို့ စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
အမြဲတမ်း လာရောက် ဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။ ကျနော်လည်း ကျနော် သိထားသလောက် ပြောပြတာပါ။ ဒီဆောင်းပါးက နည်းနည်း တိုပေမယ့် သိလိုသူတွေအတွက် အချက်အလက်လေး တွေတတ်နိုင်သမျှ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဘုရား မှာ ဘုရားကို ဆွမ်းကပ်တာ ဦးဦးဖျားဖျား ကပ်လို့ မရဘဲ အမြဲ ဆွမ်းဦး ရှိနေတာကို တော့ ကြားဖူးပေမဲ့ ဘုရားသမိုင်း ကို တစ်ခါမှ မသိခဲ့ဘူး။
ကျေးဇူးပါ ကိုစံလှကြီး ရှင့်။ :-)
မြန်မာပြည်က တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေ တော်တော်များများမှာ ဘုရားကို ဆွမ်းဦးကပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ ရှိတတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်သိသလောက် ကျိုက်ပေါလော မှဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့ တခြားဘုရားတွေမှာလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ရုပ်ဝါဒီတွေက ဘာဘာညာညာ တွေဖြစ်လာအုံးမယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာဝင်တွေအတွက် ကြည်ညိုစိတ်ကို ဖြစ်စေတယ်ဗျ။ ကြည်ညိုစိတ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဘာသာအရ ကုသိုလ်စိတ်လေဗျာ။ မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ မဖြစ်ပဲ ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုတဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ကလေး ဖြစ်နေတော့ မကောင်းဘူးလားဗျာ။ ဒီလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြည်ညိုစိတ် ဖြစ်တာကို ဘယ်သူ့မှလည်း ထိခိုက်တာ မဟုတ်ပဲနဲ့ တချို့က မနာလိုတာ ရှိသေးတယ်။ အတွေးအခေါ် လိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ဗျာ။
ကျနော် အဲဒီလိုလူတွေကို မပြောချင်လို့ပါ အမကြီးရေ။
အခုလို သမိုင်းကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုလာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစီအစဉ် မရှိပဲ ရေးလို့ နည်းနည်းတိုသွားပေမယ့် တတ်နိုင်သမျှ အချက်အလက် လေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကြိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှည်ရှည်ရေးလည်း သိပ်တော့ မထူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးတွေက ဘယ်လောက် အားစိုက်ရေးရေး သိပ်မျက်နှာသာ ပေးခံရတဲ့ စာရင်းထဲမှာ မပါနိုင်ပါဘူး။ တချို့ တလွဲတွေရေးပြီး ရှေ့စကား နောက်စကား မညီလည်း အကြိုက်ဆုံး ဆောင်းပါးတွေ ဘာတွေတောင် ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ လောကများ ဖြစ်ပုံ ပြောပါတယ်။
နောက်လဲ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ နောက်ပိုင်းကျရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပုဆိုးတကွင်းစာ နဲ့သာညီမျှတဲ့ နိုင်ငံအကျိုးပြုမှုတို့ ဘာတို့ လူတိုင်း သည်းခြေကြိုက် ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးမလား စဉ်းစားနေပါတယ်။ လက်မထောင်တဲ့ စံချိန် ၃၀၀ ကျော်ရပြီး တခြားဆိုဒ်တွေမှာပါ ပွသွားအောင်လို့ပါ။ သွပ် သွပ်
မ aye.kk ရေ
အခုလို လာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထင် မတွေ့တာတောင် ကြာပြီထင်တယ်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးပို့စ် ထဲကဆိုပါတော့။ သမိုင်းအကြောင်း ပြောတာ အတိတ်ကို လွမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ပြောသလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ တချို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သမိုင်းကို မေးကြည့်ရင် ကျနော်တွေ့ဖူးသလောက် အခြေခံတောင် မသိပါဘူး။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် သိမှ ဂုဏ်ယူစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ပါ။
နောက်လဲ အမြဲတမ်း အားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ ..
ကျေးဇူးပါပဲ ခင်ဗျာ ..
သမိုင်းအရဆိုရင် ဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော်ဟာ
တော်တော် ထက်မြက်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကျနော့် အနေနဲ့ ကိုစံလှကြီးကို တစ်ခု ထပ်ပြီး ပြောချင်တာကတော့
“ကျေးဇူးပါပဲခညာ” လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခညာ့ .. အဟီးးးးးးးး
ကျနော် အနေနဲ့လဲ လတ်တလော ရေးစရာလေးပေါ်လာလို့ ချရေးလိုက်တာပါ။ ဆောင်းပါးနဲနဲ တိုသွားလို့ လိုအပ်တာလေးတွေကို ကွန်မန့်တွေနဲ့ပဲ ပြန်ဖြေသွားပါမယ်။ ဘုရား တန်ခိုးတော် ထက်မြက်တယ် ဆိုတာက ယုံကြည်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကြည်ညိုနိုင်အောင် ရေးပေးတာပါ။ အခြားဘာသာဝင်များကလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ဆက်လက် ယုံကြည်ပါ။ ကျနော့် အနေနဲ့လည်း ဆွယ်တရား မဟောပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဘယ်ဘာသာကိုမှ စပြီး မတိုက်ခိုက်ပါဘူး။ ကြုံလို့ နည်းနည်းလေး ချဲ့ပြောပါ့မယ်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်က ဓဇဂ္ဂသုတ်တော်မှာ ဘုရားရှင်ဟာ အရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ ပြည့်စုံလို့ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းတော်မူတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်များကို ယုံကြည်ဆင်ခြင် သူများဟာလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ သက်သာရာရပြီး အကျိုးရှိတယ်လို့ ဟောပါတယ်။ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာလို့ ဘုရားဟောတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက အမြတ်လမ်းသွား ကိလေသာကင်းအောင် အားထုတ်နေသူတွေအတွက် ဘုရားရှင်က လမ်းပြပေးပြီး ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါတောင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကို ဆင်ခြင်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ပီတိကို ဝိပဿနာရှုပြီး ရဟန္တာဖြစ်သွားတာ ရှိပါတယ်။
ထို့အတူ သေခါနီးဆဲဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ လူမမာ လူငယ်လေး မြင်လောက်တဲ့ နေရာကနေ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်ပြီး ကြွတော်မူကာ ပီတိဖြစ်စေပြီး နတ်ပြည်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ဟာ လူအမျိုးမျိုးအတွက် အဆင့်ခွဲထားတာ မမေ့ပါနဲ့။ နောက်တော့လည်း ချဲ့ပြောကြတာပေါ့။
လူသားတွေကတော့ အပူအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ကြတယ်ဗျ။ ဒါကလည်း ကင်းမှ မကင်းနိုင်တာကိုး။ ဥပမာဗျာ နေမကောင်းတဲ့လူဟာ ဆေးရုံ ဆေးခန်း တတ်တဲ့ သမားတော်ထံ ကိုယ်လက်လှမ်းမှီ သလိုဆေးတော့ ကုကြမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း နေမကောင်းပြီ ဆိုကတည်းက ကြောက်မယ် စိုးရိမ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ တောင်တွေးမြောက်တွေး စိတ်လေးမယ်။ တောင်ကြံမြောက်ကြံ စိတ်ပူပန်မယ် ဆိုရင် မသက်သာတဲ့အပြင် ပိုဆိုးသွားနိုင်တာပေါ့။
အဲဒီလို ကြောက်နေမယ့်အစား ခုနပြောသလို ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော် တွေကိုဆင်ခြင် လိုက်ရင်လည်း သူလည်းစိတ်သက်သာမယ် စိတ်ချမ်းသာမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါက ကာယကံရှင် အကျိုးရှိတဲ့အပြင် ဘယ်သူ့မှလည်း အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ကဲ့ရဲ့စရာလည်း မရှိပါဘူး။ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို ဥပမာပေး ပြောပေမယ့် တခြားကိစ္စတွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပြောရရင် ဘာသာတိုင်းမှာ ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာကို ဝတ်ပြုဆုတောင်းတာ ရှိပါတယ်။ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတလော ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံပြီး ဘုရားရှိခိုးတာကို ပြဿနာလုပ်နေတဲ့လူ တွေကိုတွေ့ရလို့ပါ။ အတွေးအခေါ်လိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ဗျာ။ နားမယောင်ပါနဲ့။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးသား သူများက သူတပါး ဒါန သီလလောက်ပဲ တတ်နိုင်တဲ့ လူတွေကို မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နိဗ္ဗာန်ကို သွားတော်မူပါ။ ကျနော် သိသလောက် တကယ့် ရဟန္တာလို့ နာမည်ရတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေတောင် ဒါန သီလ လုပ်သူတွေ ဘုရားရှိခိုးတာကို ကဲ့ရဲ့တာတွေ မလုပ်ပါဘူး။
ကဲဗျာ ကျနော်ပြောတာ သိပ်ရှည်သွားပြီ။ ကျနော်လို စစ်ပွဲတွေ တိုက်တာခိုက်တာ တွေကိုပြောတတ်သူက ဒီလိုပြောရလို့ ဘုရားရှင်ကိုတောင် အားနာမိတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရှင် လက်ထက်တုန်းကတောင် စစ်သူကြီးတွေ ရှိသေးတာပဲဗျာ။
(မှတ်ချက် မိုးလုံးဟိန်းချုံး ဂိုဏ်းသားများ ဆွေးနွေးခြင်း သည်းခံပါ။ ကြောက်လို့ မဟုတ်ပါ။ သင်တို့ နာသွားမှာ စိုးလို့ပါ။)
ညီမက လေးပေါက်နဲ့မရှေးမနှောင်းမှာ ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဘုရားကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ပါတယ် ..တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် အစ်ကိုက ဒီပို့စ်လေးတင်ပေးတာ ညီမသိချင်တာတွေ သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ညီမအဲဒီဘုရားကို (၃) ခေါက်ရောက်ဖူးပါတယ် … ဒီတစ်ခေါက်ရောက်တော့ ဘုရားမှာ အမြဲဆွမ်းဦးကပ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိလေး ညီမစိတ်ထဲဝင်လာမိတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒါလေးက ယနေ့ထိတိုင်ဖြစ်သေးလား အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိတယ် … သမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးတွေကို ဖူးမျှော်ရတာစိတ်ဝင်စားသလို သမိုင်းကြောင်း လေးတွေကို ဖတ်ရ နားထောင်ရတာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ် …. အဲဒီဒေသတွေ ရောက်ရင် ညီမစိတ်ထဲမှာ ဘုရားပုထိုးတည်သူတွေရှိစဉ်ဘုရားတည်တာကို ဘယ်လိုသွားလာခဲ့ တယ်ဆိုတာလးကိုအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီး ကြည်ညိုသဒ္ဒါတရားနှင့် ဖူးမျှော်မိတယ် ….
ညီမနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားတာရှိသေးတယ် … ဦးပိန်တံတားအကြောင်းပါ …..
မတွေ့တာတောင် ကြာပြီထင်တယ်။ လာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျနော် ပြောခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း မြန်မာပြည်က တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေမှာ ဆွမ်းဦးကပ်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ သမိုင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီကို မရောက်ဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အဘိုးအဘွားတွေ ခေတ်ကတော့ သူတို့က အဲဒီလိုပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ အတွေ့အကြုံ ပေါ့လေ။ ဒီတော့လဲ ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ကုသိုလ်ပွားနိုင်တာပေါ့။
ဦးပိန်တံတားကတော့ အခုအချိန်မှာ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပေမယ့် စလုပ်တုန်းကတော့ စေတနာကောင်း ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စတင်တည်ဆောက်သူက ဦးပိန်ဆိုပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပဲ ကုလားဒိန်တဦးလို့ သိရပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ပြောရတာတော့ တမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးသူရှိလာလို့ပါ။
ပုဂံမင်းလက်ထက်က မြို့ဝန်ဘိုင်ဆပ်နဲ့ မြို့စာရေးမောင်ပိန် ဆိုတာ ကြားဘူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘိုင်ဆပ်ရဲ့ တကယ့်နာမည်အရင်းကို ဘယ်သူမှ မသိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အာမက်လား စွပ်ပရားလား တခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူက တမင်ဘိုင်ဆပ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူတာပါ။ ဘိုင်ဆိုတာက ဆရာ ဆပ်ဆိုတာက သခင်ဆိုတော့ မြန်မာတွေက သူ့ကို ဆရာသခင်လို့ အမြဲတမ်း ခေါ်ရအောင် ကျောတဲ့သဘောလို့ သိရပါတယ်။
တံတားဆောက်တာလည်း သူတို့ ငွေမပါပါဘူး။ အင်းဝနန်းတော်ဟောင်းနဲ့ မြို့ဟောင်းက သစ်တွေကို ဖျက်ယူပြီး ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ပုဂံမင်းဆီက အမိန့်တော့ ရအောင်ယူရတာပေါ့။ နောက်ပြီး သူတို့က ပုဂံမင်းကို အရက်သေစာတွေ အမျိုးမျိုးဆက် ကြက်တိုက်ပွဲ လူတိုက်ပွဲ စတဲ့ အထူးအဆန်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တွေစီစဉ်ပေးပြီး နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကို စိတ်မပါအောင် လုပ်ပြီး သူတို့စိတ်ကြိုက် ခြယ်လှယ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကိုယ့်လူ ညံ့တာလည်းပါပါတယ်။
သူတို့ ကြီးစိုးတုန်းက သူတို့လက်ချက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုး ၃၀၀၀ လောက် သူတို့လက်ထဲမှာ သေခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်း အာဏာသုံးပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တံတားကို ဆောက်ရတာလည်း တခုခုဖြစ်လို့ သူတို့လှုပ်ရှားဖို့လို့ရင် အမရပူရ တဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ဗုံးအိုးဆိုတဲ့ ကုလားရွာကြီးက ကုလားဒိန်တွေက အမြန်လာပြီး ကူညီလို့ ရအောင်လို့ သိရပါတယ်တဲ့။ နောက်တော့လည်း ဖုံးထားတဲ့ ကြားကပဲ ပြည်သူတွေရဲ့ အပူသောကတွေ သိပ်ပြင်းထန်လာလို့ နောက်ဆုံးမှာ သူ့လူတွေ ဘယ်လောက်ရက်စက် ယုတ်မာတယ်ဆိုတာ ပုဂံမင်း သိသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့မှ သတ်စေ အမိန့်ချတော့ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ကပြီး လာကြည့်တဲ့လူတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။ လူတန်းကြီးကလည်း အရှည်ကြီးပဲတဲ့။ ကဲ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျနော်လဲ အဓိကရုဏ်း လှုံ့ဆော်သူဆိုတဲ့ ဘွဲ့ရတော့ပါ။ သူကြီးပြောသလိုဆို သမိုင်းကျန်ရစ်ပါပြီ။
ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာတပုဒ်မှာ အဲဒီကုလားနှစ်ယောက်က မိန်းမကိစ္စအတော် သောင်းကျန်းတယ်ပြောတယ်။ ဘုရင်မျက်နှာသာပေးလို့ အာဏာထက်နေတဲ့အခါ အရပ်သူ၊ အရပ်သားတွေ ခံကြရတာပေါ။ ခံရပုံခြင်း မတူကြဘူးပေါ့လေ။ :eek: အဲဒါကိုသိတဲ့ မင်းသားတပါးက ( နာမည်မေ့နေတယ်၊ အကောင်ကြီးထဲကပဲ) မြို့ဝန်ဘိုင်ဆပ်သမီးကို အိမ်ခေါ်ပြီး ပြန်အနိုင်ကျင့်လိုက်တယ်တဲ့။ ပြောရရင်တော့ အပေါ်ကကောင်တွေ လီးလိုမှိုလိုလုပ်တာနဲ့ အောက်ကငထွား ခါးနာရတာပဲ။ ဘိုင်ဆပ်ကို မြန်မာပြန်ရင် ဆရာသခင် အနက်ထွက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်းသိင်္ခဝတ္ထုထဲမှာ စဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပဒေသရာဇ်ဘုရင်ကိုတောင် ပြန်ဆော်ရဲတဲ့ သတ္တိ၊ မာနကိုတော့ ချီးကြူးပါရဲ့။
မိန်းမကိစ္စ အတော်သောင်းကျန်းတာတော့ မှန်ပါတယ်။ သူတို့က အဖွဲ့လိုက် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ဖျက်ဆီးလို့ အမရပူရသူတွေဟာ နေပြည်တော်ကတောင် တိမ်းရှောင်နေကြ ရပါတယ်တဲ့။ စာချိုးတောင် ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါ။
ကုလားက အားရမှ လွှတ်တော်မူတယ်။
မလွတ်သူ ရှေးကံအကြောင်း တဲ့ဗျာ။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ ဘိုင်ဆပ်သမီးကို အိမ်ခေါ်ပြီး မတရားကျင့်တာ ပုဂံမင်းယောက်ဖ မင်းသားကြီး ဦးကျောက်လုံးပါ။ သူလည်း လူကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ဘိုင်ဆပ်က ပုဂံမင်းကို တိုင်မလို့လာတော့ မင်းသားကြီး ဦးကျောက်လုံးက အရင်တိုင်ထားလို့ ဘုရင်က ပြုံးစစနဲ့ ဘယ်လိုလဲ မောင်ကျောက်လုံးရဲ့ ယောက္ခမကြီးက အခစားဝင်တာ စောလှချည်လားလို့ ပြောလို့ ဘိုင်ဆပ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲ သူ့သမီးကို ဦးကျောက်လုံးကို ဆက်သလိုက်ရပါတယ်တဲ့။
ဘိုင်ဆပ်ကို မြန်မာပြန် ဆရာသခင် အနက်ထွက်တာရော အခုပြောတာတွေကော ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော် စာအုပ်မှာပါပါတယ်။ ကျနော်လဲ အမုန်းခံပြီးကို ပြောနေရတာပါ။
ကျနော် သိချင်လို့လေးပေါက်ကို မေးတယ်ဗျာ။ခုလို ပြောပြလို့ ကျေးဇူးပါနော်
ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုသန်းထွဋ်ဦးက ကျနော့်ကို မမေးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ကိုကြီးပေါက် အလုပ်ရှုပ်မှာရယ် နောက်ပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာ ပါပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေးလိုက်မိတာပါ။ နောက်ပြီး ကိုပေါက်က ဘုရားပုံတော်လေးတွေ တင်နေတုန်း တဘက်က သမိုင်းလေးနဲ့ တွဲဖတ်ရရင် လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး ကြည်ညိုလိမ့်မယ် ထင်လို့ပါ။ ကိုပေါက်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကိုပေါက်လည်း နားလည်မှာပါ။ အခုကိုးကားချက်တွေက ရွှေပြည်ဦးဘတင်ရေးတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင် သမိုင်းစာအုပ်နဲ့ တွင်းသင်းရာဇဝင်ကို ကိုးကားတာပါ။ တွင်းသင်းမှာက ပထမအဆိုပဲ ပါပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတောင်သမိုင်းမှာက အဆို ၂ခုလုံးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာက ဘုရားကို ပုညအမတ်ကြီးနဲ့ ပန်းထိမ်ဆရာ ငစိန်သင်တည်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဓတ်တော် ၂ ဆူဆိုတာလည်း သေချာပါတယ်။ သက္ကရာဇ်လည်း သေချာပါတယ်။
ကိုစံလှကြီးရေ ပိုစ့်တွေရော ကွန်းမန့်တွေရော ဖတ်ပြီး မသိသေးတာတွေသိလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ရေးမဲ့ သမိုင်းများလည်း မျှော်နေပါတယ်။
အမြဲတမ်း အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မ pooch လည်း ရေးပါအုံး။ ဖတ်ကောင်းမှာ သေချာပါတယ်။ ကျနော်က လက်ကို မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အခုပြောတာတွေက အမှန်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ကျနော် အတော့်ကို အမုန်းခံပြီးကို ပြောတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့က လွှတ်ထားလို့ မရပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော် ဘယ်လောက် ကောင်းအောင်ရေးရေး မထူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ ကွန်မန့်ပေးတာ ရပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော့်ကွန်မန့်တွေကို နီအောင် လာလုပ်တဲလူ ရှိပါတယ်။ မကျေနပ်ရင် ကျနော့်ပို့စ်မှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သိပါတယ်။ သူတို့ မမေးရဲပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ရပ်တည်ချက် မမှန်လို့ပါ။
ဒါကြောင့် ကျနော်ကလည်း ပြောပြီဆိုရင် ခပ်ပြတ်ပြတ် စကားလုံးတွေသုံးပြီး ပြောတာပါ။ ဒါကျနော့်ပို့စ်ကို ရိုးရိုးသားသား လာဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သဘောပေါက်မှာပါ။ အခုတောင် ကျနော် မြို့ဝန်ဘိုင်ဆပ်နဲ့ မြို့စာရေးမောင်ပိန် အကြောင်းရေးတဲ့ ကွန်မန့်က အခုတောင် နီနေပါတယ်။ ဘာတွေနာနေသလဲတော့ မသိပါဘူး။ ကျနော် ပြောတာလည်း အမှန်ကို ပြောတာပါ။
နောက်ဆို မယုံရင် ကျနော်ပို့စ်အသစ် တင်ရင် ကျနော့်ကလောင်အမည်ကို ကလစ်နှိပ်ကြည့်ပါ။ အနီးဆုံးရေးတဲ့ ပို့စ်တွေထဲက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စကားတွေတောင် နီနေတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကို ဘာလို့ပြောတာလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပါ။ ဒီလို စိတ်ထားမမှန်သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အများကို တရားစွာ ကျေညာရပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့လည်း မကောင်းမှုကို ရှက်ကြောက်စိတ်ကလေး နည်းနည်းလောက် ဝင်လာအောင်ပါ။ သိပ်တော့ မထင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး တချို့စာပေနယ်က အယ်ဒီတာတွေဆို အလှူငွေတွေ ဘာတွေလှူရင် အယ်ဒီတာ့ အကြိုက်ဆုံးဆောင်းပါးတွေ ဘာတွေ မကောင်းလဲ ပေးတတ်တယ် ကြားဘူးလို့ပါ။
ကူးယူ ဖော်ပြခွင့် ပြုပါတယ် ကိုရာမညရေ။ တကူးတက ဖတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်အဟောင်းပါ တော်တော် ကြာပါပြီ။ တခြားပို့စ်တွေလည်း အားရင် ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောထား ပေးပါဦး။